URakhale uthembisa ingcwenga adume ngayo kwiSekhukhune
UThabo “Jomo” Rakhale osanda kusayina kwiSekhukhune United, uthi abalandeli baleli qembu kumele balindele ibhola elihle kuyena.
URakhale, oke wayibamba kwi-Orlando Pirates, udume ngemijiko echwazisa izihlwele kodwa usuke ekwenze lokhu ebheke phambili. ISekhukhune isanda kunyukela kwiDStv Premiership ngemuva kokudla umhlanganiso kwiGladAfrica Championship ngesizini edlule.
Nokho kuke kwaba nesiphithiphithi ngaphambi kokuthi ikhushulwe njengoba iRoyal AM ibishaya phansi ngonyawo ithi iyona okumele ibe ngompetha. Icala leRoyal AM lisesenkantolo namanje.
“Angifuni ukusho izinto eziningi. Ngiyazi ukuthi abalandeli bahlale belindele lukhulu kimina. Ngizozinikela ngayo yonke indlela, bangalindela uJomo lo abamaziyo,” kusho uRakhale.
Selokhu ikhushulelwe esigabeni esiphezulu iBabina Noko imatasa nokuqinisa iqembu. Isanda kulanda noThabo Senong ukuthi azoqinisa ithimba labaqeqeshi. USenong useke waba yiphini lomqeqeshi kwiBafana Bafana, kanti ugcine ukubonakala eqeqeqesha eqenjini esizwe laseLesotho.
FUNDA NALA: ISundowns isazoqhubeka nokuzenzela kwiDStv Premiership
“Ngiyajabula kakhulu ukuba yingxenye yalo mndeni. Leli qembu linomfutho omkhulu. Ngiyabazi abanye babadlali lapha, bake badlala ngaphansi kwami, bengimdala kunabo. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngizoba nabo eqenjini. Into emnandi ukuthi bonke bangemukele kahle,” kubeka uRakhale.
“Leli qembu lisanda kukhuphukela phezulu. Into ebalulekile okumele ngiyenze mina ukuthi ngiqinisekise ukuthi iqembu liyahlala esigabeni esiphezulu. Ngizozinikela ngakho konke ukwenza isiqiniseko sokuthi iqembu liyayigcina indawo yalo kwiPremiership.”
Njengamanje abalandeli abayi ezinkundleni kodwa uRakhale wethemba ukuthi uzohlangana nabo maduze esedlalela iSekhukhune.
“Abalandeli kumele bazame ukuzigcina bephephile. Siyathanda ukuthi sibuye sibe nabo uma isimo sesibuyele kwesijwayelekile. Ngiyazi ukuthi vele bazongithanda. Asiphephe sonke kulesi sikhathi,” kuphetha uRakhale.
Previous Previous post: ISundowns iqinise iqembu elivele liyinqanawe, isazobusa kuleli?
Next Next post: UBilliat uveze isifiso sokuhlala kwiChiefs aphelelwe yinkontileka kuyo